लहैलहैमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? डुब्नु हाेला है ! : RajdhaniDaily.com
रमेश लम्साल - February 9, 2021 0
रमेश लम्साल - February 8, 2021 0
रमेश लम्साल - January 28, 2021 0
रमेश लम्साल - January 26, 2021 0
रमेश लम्साल - June 18, 2021 0
Home अर्थ लहैलहैमा शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? डुब्नु हाेला है !
काठमाडौँ । के तपाई अरुले भनेको भरमा लहैलहैमा लागेर शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कमा पुगेको बेला राम्रो फाइदा हुन्छ भनेर कुनै पनि कुरा नै नबुझी हाम फाल्नु भएको छ ? यदि छ भने तपाईले कमाउने होइन, लगानी गरेको रकम समेत गुमाउन सक्नुहुन्छ ।
“नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे तराई हाम्रो सुनको टुक्रा हिमाल हिराको माटो र पानी पहिलो धन धर्तीका छोराको ।” नेपाली जनमनमा...
Editor-Picks भगीरथ भण्डारी - April 10, 2021 0
बिचार डा. सुमनकुमार रेग्मी - April 7, 2021 0
२० फागुन २०७४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धनको मूल्य नबढे पनि भारतबाट आएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र डिजेलमा भाउ बढाएको थियो । बाह्य बजारमा...
भर्खरै रमेश लम्साल - May 5, 2020 0
ललितपुरबाट मास्क जफत
प्रदेश ३ रमेश लम्साल - March 6, 2020 0
ललितपुर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग जिल्ला बजार अनुगमन समितिले ललितपुरका औषधि पसल अनुगमन गर्दा टाइम मेडिकेयर फार्मेसीले रु ३० रुपैयाँ...
Breaking News रमेश लम्साल - April 7, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) स्थानीयस्तरमा फैलिने क्रम सुरु भए पनि सरकारले गर्दै आएको परीक्षण कार्य कछुवाको गतिमा अघि बढेको छ । द्रुतगतिमा परीक्षण...
घरमा खरको छानो भएकालाई जस्तापाता दिइने
प्रदेश रमेश लम्साल - March 4, 2020 0
बुुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले घरमा खरको छानो भएका नगरबासीलाई टिन दिएर खरको छानोमुक्त नगर बनाउने भएको छ । आर्थिक अभावको कारण खरको छानोमुनि...
प्रदेश ३ रमेश लम्साल - July 5, 2020 0
भर्खरै रमेश लम्साल - August 17, 2020 0
उपचारमा ढिलाइ गर्नेलाई छुट छैन: प्रधानमन्त्री
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - May 26, 2021 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ संक्रमित उपचारमा ढिलाइ गर्ने ‘जो कसैलाई छुट नभएको’ बताएका छन् । जनजीवन बचाउने सरकारको प्राथमिकता भएकाले उपचारमा...
Not-to-be-missed रमेश लम्साल - August 8, 2020 0
रमेश लम्साल - March 5, 2020